Faah faahin:- Dagaal culus oo deegaanka Reeso ku dhex-maray ciidamada dowladda iyo kuwa Al-shabaab – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaal culus oo deegaanka Reeso ku dhex-maray ciidamada dowladda iyo kuwa Al-shabaab
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa dagaal muddo kooban socday oo ka dhacay deegaanka Reeso oo qiyaas ahaan 45-km u jirta degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo.
Dagaalkaasi oo u dhaxeeyay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Al-shabaab ayaa sida la sheegay bilawday kadib markii ciidamada dowladda ay weerar culus ku qaadeen xarun ay deegaanka Reeso kaga sugnaayeen xubno ka tirsan Xarakada Al-shabaab.
Weerarkan ayaa sida la sheegay uljeedkiisu ahaa in Xarakada Al-shabaab laga saaro fariisinka ay ku leeyihiin deegaanka Reeso ee gobolka Gedo, waxaana sida la sheegay dagaalkaasi ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Taliyaha saldhiga booliska ee degmada Buurdhuubo Cismaan Nuux Xaaji oo warbaahinta gudaha la hadlay ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid Al-shabaab looga saarayay deegaanka Reeso, wuxuuna dhinaca kale sheegay inay weerarka ku dileen dagaalyahano badan oo ka tirsan Xarakada Al-shabaab islamarkaana kuwa kale ay dhaawaceen.
“Kooxaha nabad-diidka waxaan ku weerarnay xarun ay ku lahaayeen deegaanka Reeso, waxaana ka dilnay tiro badan, waxaana sidoo kale ku dhaawacnay tiro badan kale, mana jiraan wax qasaare ah oo dhinaceena naga soo gaaray dagaalkaasi” Sidaas waxaa yiri taliyaha saldhiga booliska ee degmada Buurdhuubo Cismaan Nuux Xaaji.
Dhinaca kale, ilaa iyo haatan ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha Xarakada Al-shabaab oo ay kaga hadlayaan weerarkaan lagu qaaday dagaalyahanadooda ku sugan deegaanka Reeso oo qiyaastii 45-km u jirta degmada Buurdhuubo ee gobolka Gedo.